रोचक प्रसङ्ग – Selfie Khabar
एक अर्काको लुगा फुकाल्ने शो ||
अहिले टेलिभिजन च्यानलहरुमा रियालिटी शोको बहार चलीरहेको छ । तपाईंले पनि धेरै किसिमका रियालिटी शो हेरिसक्नु भएको होला । तर यति ‘फाल्तु’ रियालिटी शो सायदै हेर्नुभएको छ । अष्ट्रेलियाको टिभी च्यानल एसबिएसमा टेलिकास्ट शुरु भएको यो रियालिटी शोको नाम नै छ ‘अनड्रेस्ड’ । यसको काम पनि नाम अनुसारकै छ । यसमा आपसमा अपरिचित दुई व्यक्तिहरुलाई एक अर्काको लुगा फुकाल्न लगाइन्छ । प्रत्येक हप्ताको सोमबार टेलिभिजनमा आउने यो रियालिटी शो १६ जनवरीबाट सुरु भएको हो । यसमा यस्ता जोडीहरु हुन्छन् जो विगतमा कहिल्यै भेट भएका थिएनन् । पिहिलो भेटमै उनीहरुले एक(अर्काको लुगा फुकालेर नांगै बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरु एउटै ओछ्य...
३९ पत्नी, ९४ छोराछोरी, ३३ नातिनातिनीसहितको विश्वकै ठूलो परिवार ||
एउटा परिवारमा कति सदस्य होलान् ! अहिलेको समयमा एउटा परिवारमा सरदर ५/६ जना सदस्य हुन्छन् । तर भारतमा एउटा यस्तो परिवार छ, जसको सदस्य औंलामा गन्न मुस्किल पर्छ । यो परिवारलाई विश्वकै ठूलो परिवारका रुपमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा अंकित गरिएको छ । कुल १८१ सदस्य संख्या रहेको यो परिवारका मुखिया जियोना चाना हुन् । उनका ३९ पत्नी छन् । त्यस्तै ९४ छोराछोरी, १४ बुहारी र ३३ नातिनातिनी उनको परिवारका सदस्य छन् । भारतको मिजोरमस्थित बख्तवाङ्गमा बसोबास गर्दै आएको यो परिवार एउटै घरमा एउटै भान्छा प्रयोग गर्दै आएको छ । सय कोठा भएको चार तले घर यो परिवारले ढाकिएको छ । जियोनाको पहिलो विवाह सन् १९५९ मा भएको ...
मोटो जिउ भएका युवती तन्नेरीहरुको रोजाइमा पर्छन ||
आम रुपमा पुरुषहरु स्लिम जिउ भएका अर्थात् सलक्क परेको जिउडालका महिलाहरु मन पराउँछन् । मोटो तथा भद्दा जिउ भएका महिला तथा युवतीहरु तन्नेरीहरुको रोजाइमा पर्न मुस्किल हुन्छ । तर दक्षिण अफ्रिकामा भने यसको ठीक विपरित मोटो जिउडालका वधुहरुको ठूलो भाउ छ । अर्थात् युवकहरु बिहेका लागि मोटो जिउका युवतीहरु म्न पराउँछन् । यो प्रथा दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनमा छ । त्यसैले त्यहाँका युवतीहरुलाई जरबजस्ती बोसो तथा चिल्लोयुक्त खाना खुवाएर मोटो बनाइन्छ । केपटाउनमा एउटा परम्परा छ । जसको नाम हो लेबलह । यो परम्पराको मान्यता के छ भने यदि नारी मोटा भ एभने उनको विवाह समयमै हुन्छ र उनलाई सुयोग्य वर मिल्दछ । त्यसैले त्यहाँ...
नुहाउने बेला किन पिसाब फेर्न मन लाग्छ ? | ( पढ्नुहोस ) ||
सडक किनारामा तथा छेउँछाउँ कुनाकाप्चामा यसो छेको पारेर पिसाब गर्ने बानी धेरैको हुन्छ । तर कतिपय मानिसहरु भने स्विमिंग पुल, नदी तथा नुहाउने बेला बाथटबमा समेत पिसाब फेर्दछन् । मान्नुस् नमान्नुस् धेरै मानिसहरुको नुहाउने बेला पिसाब फेर्ने बानी हुन्छ । त्यस्तै कतिपय मानिसको स्विमिंग पुलमा पौडी खेलिरहेको बेला, खोलामा पौडि खेलिरहेको बेला पनि पिसाब फेर्ने बानी हुन्छ । मानिसहरुले यसरी अनेक ठाउँमा पिसाब फेर्ने कुरालाई विभिन्न मानिसले विभिन्न ढंगले व्याख्या गर्लान् । तर यसमा खास कारण हुन्छ । वास्तवमा जब मानिसको सरीर चिसो पानीमा धेरै बेरसम्म चोपलिन्छ, तब मुत्रासयमा दबाब पर्दछ । सोही कारणले मूत्र प्र...
पुरुष यसकारण परिपक्व महिलासँग आर्कषित हुन्छन ||
महिलासँग पुरुष आर्कषित हुनु सामान्य विषय हो । तर पूरुषहरु आफूभन्दा परिपक्व महिलासँग आर्कषित भएको घटनाले समाजमा ठूलै चर्चा पाउँछ । छिमेकदेखी कार्यालयसम्म यस्तो सम्बन्ध बनेको देखिन्छ । आजकल चलचित्रमा समेत यस्ता सम्बन्धहरुको वास्तविक देखाइन खोजिन्छ । उमेरसँगै महिलाको सुन्दरतामा ह्रास आउँदै गरेपनि त्यहाँ केही सकारात्मक कुराहरु देखिन्छन् । त्यस्ता कुराहरुलाई नजिकबाट नियाल्ने पूरुषहरु विवाहित महिलासँग समेत नजिक हुन्छन् । के के छन् त यस्ता कुराहरु जसले परिपक्व महिलालाई पूरुषको समीपमा ल्याउँछ । केही मनोवैज्ञानिकहरु ४५ देखी ५० वर्षको उमेरसम्म महिलामा सेक्सको उत्तेजना बढ्ने बताउँछन् । उनीहरु कम उम...
हावामा यौनको स्वाद मिसिएको अनौठो पार्क
दुनियामा एक से एक चमत्कारी पार्कहरु बनिसकेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्समा फरारी वल्र्ड छ भने चीनमा डुअर्फ अम्पाएर ।त्यस्तै अर्जेन्टिनामा द रिपब्लिक अफ चिल्ड्रेेन नामक भव्य पार्क छ । तर अब ब्राजिल दुनियाका यी सबै दामी र नामी पार्कहरु भन्दा एक कदम अघि बढ्दैछ । ब्राजिलमा वाइल्ड तथा रोचक पार्क बनाउने तयारी भैरहेको छ । उक्त पार्कको थिम हुनेछ सेक्स । त्यस इरोटिक ल्याण्डमा पार्कमा केवल वयस्कहरुले मात्र प्रवेश पाउनेछन् । यो पार्क पिरासिकाबा सहरमा बनाइनेछ । यद्यपि बन्न सुरु नहुँदै यस पार्कको विरोध सुरु भैसकेको छ । यस्तो यौनिकताले भरिपूर्ण पार्क सहरमा राख्दा गलत सन्देश जाने विरोधकर्ताहरुको दाबी छ । पिर...
डस्ने सर्पलाई च्याप्पै समातेर महिला अस्पताल पुगिन्
भनिन्छ मुर्ख मानिसले आफुलाई कुकुरले टोक्यो भने कुकुर धपाउन तिर होइन कुकुरको खुट्टा टोक्नतर्फ लाग्दछ । सर्पले टोक्यो भने सर्प समात्न तर्फ लाग्दा हुन् मुर्खहरु, आफ्नो उपचारमा ध्यानै नदिई । तर यदि कोही मानिस आफैलाई डस्ने सर्पलाई च्याप्पै समातेर उपचारका लागि अस्पताल पुग्छ भने त्यसलाई के भन्ने ? छिमेकी देश भारतमा भएको छ यस्तै । भारतको कर्नाटक राज्यस्थित अंकेलामा यो घटना भएको हो । खेतमा काम गरिरहेको बेला लीलावती गौडा नामकी एक महिलालाई सर्पले डस्यो । सर्पले डेसपछि त्यसको घरेलु उपचार गरी जतिसक्दो छिटो अस्पताल जानुपर्नेमा उनी उल्टै आफुलाई डस्ने सर्पको पछि कुँद्न थालिन् । अनि उनले सर्पलाई पक्रिन सफल ...
७० वर्षकी महिलाले बच्चा जन्माइन्, ७९ वर्षका बुढा बाउ बने
महिनावारी सुकेपछि महिलाहरुले प्राकृतिक रुपमा बच्चा जन्माउन असम्भव हुन्छ र सामान्यतया ४५।५० वर्षमा महिलाको महिनावारी सुक्दछ । तर भारतकी एक महिलाले भने ७० वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माएर विश्व किर्तिमान कायम गरेकी छिन् ।भारतको हरियाणास्थित एक निसन्तान क्लिनिकमा टेस्टट्युब प्रविधिबाट हालै ७० वर्षकी दालजिन्दर कौरले छोरा जन्माएकी हुन् । यति बुढो उमेरमा सन्तानको के रहर जाग्या होला ? भन्ने मानिसहरुलाई जवाफ दिँदै उनले आफु बच्चा पाउनका लागि खासै बुढो नभएको भन्दै छोरो आएसँगै परिवारले पूर्णता पाएको बताइन् । नवजात छोराको नाम अरमान राखिएको छ ।७९ वर्षमा बाउ बन्न सफल भएका मोहिन्दर सिंह गिलले आफुहरु बुढा भएका का...
सेक्स गर्नेको लिंग नै चोरी हुन थालेपछि…
यो समाचारको शीर्षक पढ्दैमा अपत्यारिलो तथा अनौठो लाग्नसक्छ । एकजना पुरुषले एक रातमा ५० जना महिलासँग सेक्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रै पर्छ । तर ग्रिक पौराणिक कथाका एक पात्र इराक्लिक्सले भने एक रातमा ५० जना महिलासँग सेक्स गर्न सक्थे रे । उनमा केटीहरुको तिर्खा कहिल्यैपनि मेटिँदो रहेनछ । तर अहिले ती गि्रक हिरोको मर्दपना संकटमा परेको छ । फ्रान्सको तटिय सहर आहकेसोमा रहेको इराक्लिक्सको शालिकबाट लगातार लिंग चोरी हुने गरेको छ । आहकेसोको पार्क मोरेक्समा सन् १९४८ मै इराक्लिसको ३ मिनटर अग्लो मूर्ति बनेको थियो । उक्त मूर्तिको यौनांगमा भने लगातार धावा बोलिँदै आएको छ । पटक पटक यी गि्रक हिरोको लि...
अब स्मार्टफोनबाटै कानको जाँच
स्विडेनका शोधकर्ताहरुले स्मार्टफोनको माध्यमबाट कानको संक्रमणको जाँच गर्ने नयाँ प्रविधि पत्ता लगाएका छन् । शोधकर्तामध्येका एक स्विडेनका यूमेया विश्वविद्यालयका क्लाउड लरेन्टका अनुसार डाक्टरहरुको अभाव हुने र मानिसहरु कानको संक्रमणबाट धेरै पीडित हुने विकाशशील देशका मानिसहरुका लागि यो प्रविधि निकै लाभदायी हुने देखिएको छ । अहिलेपनि गाउँघरतिर कान दुखेमा वा कानमा संक्रमण भएर पाकेमा विभिन्न हानिकारक घरेलु उपाय हरु अपनाउने चलन छ । त्यसले गर्दा मानिसको कानको श्रवण क्षमता नै गुम्ने र बहिरोपना निम्तिन सक्ने जोखिम हुन्छ । कानको संक्रमणको जाँचलाई सहज बनाउने क्रममा शोधकर्ताहरुले मोबाइल फोनबाटै आफ्नो कानको...